Wasiirka Gaashaandhigga DFS oo tababar u soo xiray Ciidamo (Sawiro) – Radio Daljir
Maarso 15, 2018 4:18 g 0
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Generaal C/laahi Cali Caanood ayaa cutubyo ka tirsan Ciidamada Danab ee Xoogga dalka tababar mudo Hal sano u socday ugu soo xiray Dugsiga Tababarka Generaal Dhega-badan ee magaalada Muqdisho.
Gaadi ciyaar iyo dhoolatuska Ciidanka oo ku aadan Tababarka ay qaateen ayay ku goobta ku soo bandhigeen Ciidamada, waxaana Tababarkaas bixiniyay Macallimiin Soomaaliyeed oo la siiyay qibrado ku aadan Difaaca dalka.
“Tababar aad iyo aad u fiican bey qaateen, waxaan aad iyo aad ugu mahad celineynaa macallimiintii tababartay iyo sida ay awaamiirta ay u qaateen, waxay ahaayeen 200, inta badan dibishiliin iyo Aqlaalq xumaa meesha looga ceyriyay, waxaan u rajeynayaa ciidanka Danab iney ku guuleystaan hadafka ay leeyihiin una gutaan waajibkooda, Shabaabna meel walba ay joogaan ugu tagi doonaan,’’ Ayuu yiri General Maxamed Maxamuud Saneey.
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Janeraal C/laahi Cali Canood oo ka hadlay Munaasabada ayaa ku ammaanay macallimiinta Tababrkaasi bixinayay sida ay u diyaariyaan Ciidamada kuwaas oo ka qeyba qaadan doona Howlagalada dalka looga saarayo Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay Ciidanka hadda tababarka dhameystay ee Danab iney yihiin cutubkii shanaad, wuxuuna ku ammaanay Ciidamada Danab sida geesinimada leh ee Al-Shabaab ula dagaalamayaan ugana saareen degaano badan oo dalka.
Wasiirka Gaashaandhiga Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan oo soo xirey Tababarkan ayaa kula dardaarmey Cutubyadii qaatey Tababrka ee katirsan Danab iney u diyaar-garoobaan Difaaca Dalka.
“Waxaad ka mid noqoteen Ciidamada Danab ee Xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ku faanto bulshada Soomaaliyeed, waxaad ka mid noqoteen ciidamada Danab oo ah ragga safka hore ugu jira sidii loo difaaci lahaa shacabka Soomaaliyeed loogana Difaaci lahaa Argagixisada gudaha” Ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhiga.
Saraakiisha Mareykanka: Dhaxalsuge MBS oo hooyadi ka qariyey aabbihiis Boqor Salmaan (NBC News)